ဂီတ - ခေတ်သစ်လှပသောကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်း ... | Linux မှ
ဂီတ - ခေတ်သစ်လှပသောကစားသမားတစ် ဦး ။
ငါမွေးဖွားခြင်းအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကို Melomaniac လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဂီတဖွင့်စက်ကောင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာထဲမှာမလွဲမရှောင်သာအသုံးချနိုင်သော application များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က ကျွန်တော်ရေးခဲ့သည် အပေါ် Amarok, Clementine နှင့်ငါ့လက်ရှိ header ကို, ကတ္တရာ။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး မှပြောသောမှတ်ချက်များအနက်မှတစ်ခု ဂီတ, ငါစပ်စုခဲ့သည်ဒါကြောင့်ငါကတပ်ဆင်ထားနှင့်ငါ့ဆွဲဆောင်မှုထားခဲ့ပါ။
ဂီတ ကတီထွင်ခဲ့သည် Flavio Tordiniလျှောက်လွှာများရေးသားသူသည်သူတို့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည်ဟုလူသိများသည် တောင်ကြီးမြို့ y Musictube.
တကယ်တော့, ဂီတ ဒါဟာအတွက်ဗားရှင်းကမ်းလှမ်းကတည်းကအလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ် Windows ကို, OS X ကို y GNU / Linux များနှင့်လှူဒါန်းမှုများကိုအဆုံးစွန်သောအဘို့ကိုလက်ခံနေစဉ်, ကြွင်းသောအရာအဘို့ဝယ်ယူရန်ထို option ရှိပါတယ်။
ကစားသမားတစ် ဦး အကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနေတာက၎င်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်အလင်းနှင့်အနည်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ချင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည် iTunes က။ ထိုအခါငါက၎င်း၏မစ်ရှင်ဖြည့်ထင်, ပိုမိုလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့နှင့်မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ငါတို့ပထမဆုံးအကြိမ်ပြေး ဂီတ ယုတ္တိနည်းအတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဂီတစုဆောင်းမှုရှိသည့်ဖိုင်တွဲကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတောင်းဆိုသည် -
ပုံမှန်အခြေအနေမှာ ဂီတ သင်အယ်လ်ဘမ်အဖုံးများနှင့်သူတို့ထံမှသတင်းအချက်အလက်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည် Last.fmဤဆောင်းပါးကိုစတင်သောပုံတွင်တွေ့ရသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်မူဤအဆင့်ကိုမေ့သွားသည်
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်ရလဒ်များကိုအနုပညာရှင်နေရာတွင်မဟုတ်ဘဲရှာဖွေရေးအကွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေချင်သောအရာကိုရွေးပြီးသောအခါ၊ အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုကိုနှိပ်သောအခါအဆင့် ၃ ဆင့်သို့ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ အဆိုတော်» Album » Playlist.
ငါပြောခဲ့သကဲ့သို့, ရွေးချယ်စရာများကိုတကယ်ရှားပါးဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လျှင် null ။ ရွေးချယ်စရာများအားဖြင့်ကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည်လမ်းရှာ။ မရပါ ဂီတ system tray တွင် icon တစ်ခုရှိခဲ့သလားသို့မဟုတ်အယ်လ်ဘမ်ရုပ်ပုံကိုဒေသအလိုက်တင်ခဲ့သည်။
တကယ်တော့တွင်တည်ရှိသော configuration ဖိုင်ထဲမှာ /home/tu_usuario/.config/Flavio Tordini / တစ်ခုခုကိုကြည့်ဖို့အများကြီးမဟုတ်ပါဘူး။
အပိုရွေးချယ်စရာများမရှိ။ ၎င်းသည်တေးဂီတဖွင့်စက်၏အခြေခံလုပ်ဆောင်မှုများကိုဆိုလိုသည်၊ ကျပန်းပြန်ဖွင့်ခြင်း၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားဂီတအမျိုးအစားဖြင့်စစ်ထုတ်ခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ။ အယ်လ်ဘမ်များကိုနာမည်၊ လူကြိုက်များမှု၊ နှစ်၊ သီချင်းအရေအတွက်သို့မဟုတ်ကစားသည့်အကြိမ်အရေအတွက်အလိုက်စီစစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်ထိုထက်မကပါ။
သော်လည်း ဂီတ ဟုတ်ကဲ့၊ ၎င်းသည်သင့်အားအင်တာနက်မှအနုပညာရှင်များအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရယူရန်ခွင့်ပြုသော်လည်းသင်အသုံးပြုသောရင်းမြစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့မပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့်တင်းကြပ်စွာ။
Last.fm မှနားထောင်သောသီချင်းများ၏အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့နိုင်သည်၊ ကစားသမားအားမျက်နှာပြင်အပြည့်ဖြင့်ဖွင့်နိုင်ပြီးလမ်းကြောင်းတစ်စုံနောက်မှမကစားနိုင်တော့ပါ။
အကယ်၍ သင်သည်ရိုးရှင်းသောကစားသမားတစ် ဦး ကိုမျက်စိမမြင်ဘဲကြည့်ရှုနိုင်ပြီးအသွင်သဏ္termsာန်အရအလွန်လှပသော်လည်း (အများအားဖြင့်တော့အမြဲရှိသည်) ဖွဲ့စည်းပုံအလွန်နည်းပါးသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုများထဲမှမဟုတ်ပါ။
၎င်းသည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးရှိနေသော်လည်း၎င်းသည်အရင်းအမြစ်အနည်းငယ်ကိုသုံးစွဲသည်။ ၉၅ MB လောက်သော memory သည် ၇၅ MB ကျော်လွန်သည် Clementine နှင့်၏ 45 MB ကတ္တရာ.
သူလုပ်ရမယ်ဆိုရင်သူကောင်းကောင်းလုပ်တယ်။ တကယ်တော့၎င်းရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများကြောင့်၎င်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသည် ဆူညံသံ အတွက် မူလတန်း OSထို distro ၏အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည့်အပြင်၎င်းသည်ပိုမိုတည်ငြိမ်သည်။
စီမံကိန်းစာမျက်နှာမှ installer ကိုသာရနိုင်သည် Ubuntu ကို, ဒါပေမယ့်၌တည်၏ မုတ် ကျနော်တို့ကနေ compile နိုင်ပါတယ် AUR console မှာပြေးနေတယ်။
ကျန်တဲ့ non-based ဖြန့်ဝေမှုရှိမရှိငါမသိဘူး Ubuntu ကို o မုတ် ၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်နည်းလမ်းရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » ဂီတ - ခေတ်သစ်လှပသောကစားသမားတစ် ဦး ။
PowerAmp ၏ဆိပ်ကမ်း (Android) ကို Linux damn !! ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကို Android တွင်အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုအဖြစ်ရှာတွေ့နိုင်သည်။ တစ်နေ့တွင်၎င်းသည်ဂီတဖွင့်စက်အဖြစ် Linux ရှိအခြားနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
ငါမသိ, ငါ Elav နှင့်အတူသဘောတူသည်, ငါ့အရသာအတွက်အခြေခံ။ ငါထင်တာကတော့ developer တော်တော်များများကဗေဒကိုအနည်းဆုံးသဘောသဘာဝကိုအသုံးချခြင်းနဲ့ရှုပ်ထွေးစေတယ်၊
ငါ Ubuntu 1.3 (လတ်ဆတ်ဆုံး) ဗားရှင်း 12.04 ရှိသည်နှင့်အဖုံးများနှင့်မည်သို့ကွာခြားသည်ကိုကြည့်ပါ။ ငါ Trisquel 1.2 ၌ဗားရှင်း6ရှိသည်နှင့်ငါဖြစ်စေအဖုံးများနှင့်အတူပြproblemsနာများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကစားသမားစုံလင်သည်မဟုတ်, သို့သော်ငါမြင်ရတဲ့အကောင်းဆုံး။
သို့မဟုတ်: sarcasm? ဘယ်မှာလဲ xD ကို archlinux မှာစမ်းသပ်မယ်၊ နောက်ဆုံးပြင်ဆင်မယ့် update ကိုစလိမ့်မယ်။
wooow အရင်းအမြစ်စားသုံးပါ! xD အရင်းအမြစ်များအလွန်အကျွံအသုံးပြုမှုကိုကျွန်တော်တင်ပြလိုသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်အင်္ဂလိပ်နှင့် ပတ်သက်၍ သိပ်မကောင်းပါ
အမှားအယွင်းများသို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလိုသူများအတွက် menu တွင် Greetings ရွေးစရာရှိသည်။
ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောကစားသမားဖြစ်သည်ဟုထင်သည်၊ သို့သော်၎င်းတွင်မတူညီသောညီမျှမှုမရှိခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့နားထောင်သည့်ဂီတအမျိုးအစားသို့မဟုတ်အသံအားကျွန်ုပ်တို့၏အရသာနှင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီပြုပြင်ရန်အရေးကြီးသည်။
ကျွန်ုပ်သည် Musique ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသိကျွမ်းခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာတွင်ဂီတမရှိတော့သော်လည်းရိုးသားစွာချစ်ပါသည်။ ဒီနေ့ခေတ်တွင် Deezer သို့မဟုတ် Grooveshark နှင့်အဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ပါ။
ပြည်တွင်းမှာတစ်ခုခုရှိတာအမြဲတမ်းကောင်းတယ်။ Musique မှာငါ့ရဲ့ဂီတ 5gb လောက်ရှိတယ်။ ငါ့ရဲ့အင်တာနက်ပျက်သွားရင် (ဖြစ်ခဲတယ်) ။ ငါလည်းပုံမှန်အားဖြင့် html5 bandcamp, jamendo နှင့် grooveshark တွင် streaming များစွာလုပ်လေ့ရှိသည်။ http://html5.grooveshark.com/
ငါ့မှာဂီတ ၁၃၂ gigabytes ရှိပြီးတစ်နှစ်နဲ့လကြာ Linux ကိုကူးပြောင်းလိုက်ပြီး၊ windows မှာလွဲချော်တာတစ်ခုတည်းသောတစ်ခုကတော့ iTunes ဆိုတာမိုက်ခရိုဆော့ပင်မဟုတ်ဘဲ။
သူနဲ့နီးတဲ့ Linux application တစ်ခုမှမရှိဘူး၊ ဒါကြောင့် clementine ကိုငါရွေးရတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကဒီ iTunes အကောင့်ထဲကိုဝင်ဖို့ဒီ virtualizing windows တွေကိုပဲလုပ်လိုက်တာပဲ။
Apple မှာ Store နဲ့ Player ကို Linux platform မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အခွင့်အရေးရှိလား၊ ဒါမှမဟုတ် iTunes ပေါ်ထွက်လာမယ့် Linux player ကောင်းကောင်းဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးရှိလား။ : - /
132gb local, great, ဒီဓလေ့တွေကိုမဆုံးရှုံးစေရဘူး။
[ထင်မြင်ချက်] ကျွန်ုပ်တို့ GNU / Linux တွင်ပိုမိုသော application များနှင့်တသမတ်တည်းသော interfaces လိုအပ်သည်
အကောင်းဆုံး Linuxero Desktop: ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၄ - ရလဒ်